Digirta ukunta leh hilib doofaar iyo mozzarella | Cuntooyinka Jikada
Maria vazquez | 14/08/2021 10:00 | Cunnooyinka khudradda, Cunnooyinka fudud
Pizza -yada aan maanta soo jeedinayo waxay noqonayaan bilow fiican ama casho aan rasmi ahayn habeenada sabtida. Waana in pizzas -ka aubergine -ka leh hilib doofaar iyo mozzarella ay fududahay in la diyaariyo waxayna jecel yihiin ku dhawaad ​​qof walba mahadnaqa isku darka maaddooyinka.
Fikradda ah u isticmaal xaleef aubergine saldhig ahaan of pizzas waxay iila muuqataa fikrad aad u asal ah. Iyaga waxaad ka abuuri kartaa kun iyo dhowr isku -dhafan adigoo isku daraya maaddooyinka aad ugu jeceshahay. Waxaan isku darsaday munaasabaddan basasha, basbaaska, hilibka doofaarka iyo mozzarella, markaa xor u noqo inaad abuurto.
Pizzas eggplant waa, marka lagu daro inay fudud yihiin, caafimaad qaba iyo hab soo jiidasho leh oo lagu soo bandhigi karo ukunta kuwa yaryar iyo kuwa yaryarba. Xulo taas haddii ukun weyn oo weyn si saldhigyada pizza ay deeqsi u yihiin oo u adeegaan hal adeeg. Ma soo jiitaan dareenkaaga? La soco talaabo talaabo.
pizza aubergine oo leh hilib doofaar iyo mozzarella
Cunnooyinkaan aubergine -ka ah oo leh hilib doofaar iyo mozzarella waxay ku farxi doonaan carruurta iyo dadka waaweyn inay yihiin casho bilawga ama aan rasmiga ahayn.
5 qaado oo suugo yaanyo ah
4 xaleef hilib doofaar ah
1 koob oo ah mozzarella buffalo
Waxaan ku bilaabeynaa inaan jarjarno basasha julienne iyo basbaasyada oo dhuuban.
Waxaan sidoo kale jarjarnay hilibka doofaarka iyo mozzarella.
Kadib Waxaan ku dubnaa foornada ilaa 190ºC, waxaan ku saraynaa saxaaraddii warqad dubis ah si aan u dhammaynno waxaan ku cadaynaa saliid saytuun.
Hadda haddii, oo leh dhammaan maaddooyinkii hore loo diyaariyey, jarjar ukunta jeex aan ka badnayn 1 sentimitir.
Waxaan gogosha saarnaa saxarka wax lagu dubo iyo waxaan ku faafinnay yaanyo shiilan.
Kadib waxaan u qaybinaa basasha iyo basbaaskii oo dusha kaga yaal.
Ku saabsan khudaarta waxaan dhigeynaa hilibka doofaarka iyo si aan u dhammaystirno, mozzarella oo cad cad u kala goynay.
Xilli, ku dar oregano yarHaddii aan ka helno, waxaan ku ridnaa foornada, waxaan ku ridnaa saxaaradda qeybta hoose.
Waxaan ku karineynaa 190ºC oo leh kuleyl hooseeya muddo 10 daqiiqo ah. Ka dib, waxaan hoos u dhignaa heerkulka ilaa 180ºC oo waxaan ku dubnaa kuleyl kor iyo hoosba ilaa pizzas aubergine ay diyaar yihiin.
Wadada buuxda ee maqaalka: Inicio » Suxuunta » Cunnooyinka khudradda » Baastada ukunta leh hilib doofaar iyo mozzarella